MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » Dib-u-habayn iyo Dayactir Lagu Samaynayo Xarunta Caafimaadka ee Abaarso
Dib-u-habayn iyo Dayactir Lagu Samaynayo Xarunta Caafimaadka ee Abaarso
Last Modified: Tue 04th Dec,2012
Abaarso (Jam)- Dib-u-habayn iyo dactir xooggan, ayaa lagu samaynayaa xarunta caafimaadka ee tuulada Abaarso oo ku taal dhinaca galbeed ee caasimadda Hargeysa, taasoo aan shaqayn muddo 10 sannood ah oo ay dhisnayd.
Xarunta caafimaadka ee magaalada Abaarso oo la dhisay sannadkii 2003-dii, kana kooban dhawr qol, waxa dib-u-haynteeda iyo dayactirkeeda iska kaashaday Wasaaradda Caafimaadka Somaliland, maamulka iyo waxgaradka tuuladaas iyo hay’adda IFAD oo Qaramada Midoobay u qaabilsan daryeelka bulshooyinka reer-guuraaga ah ee ku dhan dalalka dunida saddexaad.
Xaflad loo sameeyey dhagax-dhigga dib-u-haynta xarunta caafimaadka dhallaanka iyo hooyada oo lagu qabtay shalay magaaladaas, waxa ka qaybgalay Isuduwaha Caafimaadka Gobolka Maroodi-jeex Dr. Sayid Xasan, guddoomiyaha tuulada Abaarso Mr. Rashiid Xuseen Cige, Sulub Cali iyo Caasha Cabdi Suldaan oo ka socday hay’adda IFAD, odayaasha iyo haweenka tuulada Abaarso.
Isuduwaha Caafimaadka Gobolka Maroodi-jeex Dr. Sayid Ismaaciil Xasan oo halkaas ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda xaannaanooyinka caafimaadku u leeyihiin bulshada, isagoo nasiib-darro ku tilmaamay in muddo toban sanno ah ay xidhnayn xarunta xarunta hooyada iyo dhallaanka ee Abaarso.
Dr. Sayid waxa uu intaa ku daray markii ay arkeen baahida caafimaad ee bulshada degaanka Abaarso qabaan inay wasaarad ahaan go’aansadeen sidii dib loogu furi lahaa, loogana shaqaysiin lahaa xannaanada.
“Xannaanada hadda ayaa la furayaa oo waa laga shaqaysiinayaa, waxaanan u mahadnaqayaa hay’adda IFAD oo naga aqbashay inay maalgeliso dayactirka lagu samaynayo, annagana wasaarad caafimaad ahaan waxa naga go’an in aannu sida ugu dhaqsaha badan u keenno qalabkii caafimaadka, dawooyinkii iyo shaqaalihii ka hawlgalayba.
Siyaasadda wasaaradda caafimaadka waxa ka mid ah inaan la arkin amma la maqlin in hooyo iyo carruur yaryar caafimaad la’aan ugu dhintaan degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee dalka,” ayuu yidhi Isuduwaha Caafimaadka Gobolka Maroodi-jeex.
Sidoo kale, waxa uu dadweynaha iyo maamulka tuulada Abaarso kula dardaarmay inay ilaashadaan, kana shaqeeyaan daryeelka xannaanada caafimaadka, wixii kaga soo hagaaga talo iyo tusaalebana ka geystaan, isagoo ugu baaqay in la ilaaliyo dhulka xarunta caafimaadku ku fadhido oo aanay dadku ku durkin si markasta oo loo baahdo loo sii ballaadhin karo.
Guddoomiyaha tuulada Abaarso Mr. Rashiid Xuseen Cige, ayaa isaguna si weyn ugu mahadnaqay Isuduwaha Caafimaadka Gobolka Maroodi-jeex iyo hay’adda IFAD oo uu xusay in aan la’aantood wax dayactir iyo daryeel ah toona lagu sameeyeen xannaanada magaaladiisa, waxaannu sheegay in baahiyaha ugu badan ee ay bulshadiisu tabaysay ahayd dhinacyada caafimaadka iyo biyaha, isagoo sidoo kalena ugu baaqay Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha in lagala shaqeeyo sidii biyo-gelin loogu samayn lahaa Abaarso oo hadda aad u ballaadhanaysa.
Mr. Sulub Cali iyo Caasha Cabdi Suldaan labaduba ka socday hay’adda IFAD, ayaa sheegay in hay’adooda oo ka tarjumaysa siyaasadda iyo qorshaha istaraatijiyadeed ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ay aqbaleen inay maalgashi ku sameeyaan dayactirka iyo ka shaqaysiinta MCH-ka Abaarso, isla markaana hay’ad ahaan diyaar u yihiin inay xannaanadaas ka taageeraan dhinacyada qalabka caafimaadka iyo daryeelka bulshada.
Tuulada Abaarso oo 20km geesta galbeed ka xigta caasimadda Hargeysa, waxay xarun u tahay bulshooyin kala duwan oo aad u tiro badan oo dhammaantood baahin weyn u qaba helista adeegyada bulshada ee ka maqan degaannadaas. Xigasho: Jamhuuriya